72% လျှော့စျေး Oxfam Novib ကူပွန်များနှင့် လျှော့စျေးကုဒ်များ
Oxfam Novib ကူပွန်ကုဒ်များ
အမှာစာ ၇၀% ချက်ချင်းရယူသည် CouponAnnie မှကြိုဆိုပါသည်။ သြဂုတ် ၂၀၂၁ တွင်လူကြိုက်အများဆုံး Oxfamnovib Nl ကမ်းလှမ်းမှုများ၊ ဈေးဆစ်မှုများနှင့်ကူပွန်များကိုယနေ့တွေ့နိုင်သည်။ ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးကူပွန်ကိုရှာဖွေပါ။ ပရိုမိုကုဒ်ဖြင့်ပုံမှန်စျေးနှုန်းပစ္စည်းများတွင် ၃၀% အထိသက်သာပါ။ ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်စျေးလျှော့စျေး ၃၀% အထိခံစားရန်အောက်ပါစာရင်းမှရွေးချယ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
ကူပွန် Code နှင့်အတူအပေါငျးတို့သအော်ဒါ 50% ကိုချွတ် ak30% လျှော့စျေးများဖြင့် paktuit.oxfamnovib.nl တွင်သိမ်း။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် Paktuit Oxfamnovib Nl မှနောက်ဆုံးအခမဲ့ပို့ဆောင်ကူပွန်များ၊ ပရိုမိုကုဒ်များနှင့်လျှော့စျေးများကိုရှာပါ။ couponannie.com တွင်နေ့စဉ်သီးသန့်နှင့်ကမ်းလှမ်းချက်အသစ်များကိုပေါင်းထည့်သည်။
သင်ယခုမှာယူပါက 95% ချွတ်ဖမ်းပြီး Oxfamnovib.nl - Pakt Uit ကူပွန်များ နောက်ဆုံးသတင်း။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်။ Oxfam Novib strijdt voor een rechtvaardige wereld zonder armoede ။ Samen သည် mensen, organisaties, bedrijven en overheden နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ projecten en lobby မှတဆင့် Lokaal Ã© n internationaal ။
၀ ယ်ယူမှုများမှရရှိသည့်လက်ငင်း ၉၀% Oxfam Novib Actiecode en Promotiecode - Juli 2021. Om meer geld te beslim, kunt u de volgende Oxfam Novib Actiecode en Aanbiedingen gebruiken om tot 70% te besidence voor Augustus 2021. Oxfam Novib is ook trots om u 365 dagen per jaar de beste service te bieden ။ Als je vragen hebt de de aankoop, zal hun klantenservice je zo snel mogelijk helpen ။
Promo Code ဖြင့် ၅၅% ပိုလျှံသည် oxfam novib Archieven - Books4Life NijmegenBooks4Life ... COUPON (လွန်ခဲ့သော ၅၂ နှစ်) Books 52 Life Nijmegen Sint Annastraat472 GG Nijmegen Openingstijden (aangepast ivm Corona): maandag tot en met vrijdag van 6524-13.00 uur en zaterdag van 16.00 ယူ -၁၆း၀၀
ဤအထူးလျှော့စျေးဖြင့် ၃၀% လျှော့စျေးရယူပါ Beeldagent ဖြစ်သည်။ Fotografe en oud-nieuwslezer Sacha de Boer reisde vorige ရက်သတ္တပတ် samen နှင့် Oxfam Novib naar … Facebook.com မှတဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အမျိုးအစား ...၊ နောက်ထပ်ကြည့်ရန်ကူပွန်များ Media24 / သတင်းစာများ COUPON (လွန်ခဲ့သော ၄ ရက်) က Beeld သည်တစ်ပတ်ခြောက်ရက်ထုတ်ဝေသောအာဖရိကသတင်းစာများအတွက်ဆုရသတင်းစာတစ်ခုဖြစ်သည်။
45% Off Sitewide Voucher Code Oxfam သည်ဆင်းရဲမွဲတေမှု၏မတရားမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်၊ မိသားစုများနှင့်လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်များတည်ဆောက်ရန်နှင့်သြဇာကြီးမားသောတာဝန်ခံမှုရှိရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိရန်။ Oxfam သည်ဆင်းရဲမွဲတေမှု၏မတရားမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့အတူတကွအသက်တွေကိုကယ်တယ်၊ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အဖြေတွေကိုဖန်တီးပြီးစွမ်းအားကြီးတဲ့တာဝန်ယူမှုကိုကိုင်ထားတယ်။
သင်ယခုမှာယူသောအခါချက်ချင်း ၄၅% လျှော့စျေး Oxfam သည်အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလ (၂၀၂၉၁၈) နှင့်စကော့တလန် (SC202918) တို့တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအလှူတစ်ခုဖြစ်သည်။ Oxfam GB သည်နိုင်ငံတကာပေါင်းစည်းမှု Oxfam ၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
အပို 15% off ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်အကျပ်အတည်းသည်အကူအညီများကို၎င်း၏ကန့်သတ်ချက်များကိုဆန့်ထုတ်နေသည်ဟုအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီများကဆိုသည်။ သြဂုတ်လ ၁ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများရှိစခန်းများအပြင်ဘက်တွင်နေထိုင်ကြသည့်ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များသည်၎င်းတို့အလွန်အမင်းလိုအပ်နေသောအကူအညီကိုဆုံးရှုံးလိုက်ကြောင်းယနေ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီငါးခုမှသိရသည်။
အပို 15% သင့်ရဲ့ဝယ်ယူမှုကိုချွတ် OpenIGO သည်၎င်း၏ကွန်ရက်၏အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်၊ နိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်ကုလသမဂ္ဂစနစ်နှင့်အခြားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံး၌လူသစ်စုဆောင်းမှုနှင့်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပိုမိုဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်ရှာဖွေရန်သင့်အားဖိတ်ကြားသည်။
လျှော့စျေး 60% ကန ဦး ချိန်းဆိုမှုများအတွက် Oxfam Novib သည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးတစ်နှစ် (၁ လစမ်းသပ်ကာလ) အပါအ ၀ င်စာချုပ်တစ်ခုပေးသည်။ အဆိုပါရာထူးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oxfam သည်တရားမျှတသောလျော်ကြေးငွေပက်ကေ့ဂျ်အတွက်မျှတပြီးပြည့်စုံသောလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။
သင်ယခုမှာယူသောအခါ 50% ချွေတာချပါ ၂၀၂၁ အတွက်စူပါစတားဆုရရှိသူများမှာ .... Oxfam Novib သည် Oxfam iSME Green Superstar ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိသူများကိုကြေငြာရန်ဂုဏ်ယူသည်။ အီဂျစ်၊ ဆိုမာလီလန် (ဆိုမာလီယာ)၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ယူဂန်ဒါ၊ ဗီယက်နမ်နှင့်ပါကစ္စတန်တို့မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သောလျှောက်လွှာ ၁၀၀ ကျော်ကိုလက်ခံရရှိသောကြောင့်ယခုနှစ်တွင်အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ နိုင်ငံတစ်ခုစီ၌ဂျူရီကော်မတီများသည်စုစုပေါင်းအယောက် ၃၀ ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
သင်ယခု ၀ ယ်ပါကချက်ချင်းလက်ငင်း ၆၅% လျှော့စျေး ကန ဦး ချိန်းဆိုမှုများအတွက် Oxfam Novib သည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးတစ်နှစ် (၁ လစမ်းသပ်ကာလ) အပါအ ၀ င်စာချုပ်တစ်ခုပေးသည်။ ရာထူးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oxfam သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှူရှင်များအားတရားမျှတပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။
အရောင်းမြှင့်တင်မှု၏ 70% Oxfam အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသဘာဝဘေးနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေများအားလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ရန်ခွင့်ပြုသောအထူးရန်ပုံငွေဖြစ်သည်။ သင်ဤရန်ပုံငွေသို့လှူဒါန်းပါကသင်၏အလှူငွေကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏အရေးပေါ်လုပ်ငန်းအတွက်သုံးလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤ Oxfam လုပ်ငန်းခွဲများထဲမှအထွေထွေအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေကို ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးချယ်ပါ။ Oxfam America (အမေရိကန်)
ဝယ်ယူမှုများမှအပို ၅၅% အပို ကန ဦး ချိန်းဆိုမှုများအတွက် Oxfam Novib သည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးတစ်နှစ် (၁ လစမ်းသပ်ကာလ) အပါအ ၀ င်စာချုပ်တစ်ခုပေးသည်။ ရာထူးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oxfam သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှူရှင်များအားတရားမျှတပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။
ဤအထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူအပို 85% စျေးနှုန်း ကန ဦး ချိန်းဆိုမှုများအတွက် Oxfam Novib သည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးတစ်နှစ် (၁ လစမ်းသပ်ကာလ) အပါအ ၀ င်စာချုပ်တစ်ခုပေးသည်။ အဆိုပါရာထူးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oxfam သည်တရားမျှတသောလျော်ကြေးငွေပက်ကေ့ဂျ်အတွက်မျှတပြီးပြည့်စုံသောလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။
ကူပွန်နှင့်အတူအပေါငျးတို့သအော်ဒါ off 60% ကန ဦး ချိန်းဆိုမှုများအတွက် Oxfam Novib သည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးတစ်နှစ်စာချုပ်ကိုပေးသည်။ အဆိုပါရာထူးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oxfam သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှူရှင်များအားတရားမျှတပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။ ဤရာထူးကိုစကေး ၉ တွင်ခွဲခြားထားသည်။
ဘောက်ချာဖြင့် ချက်ချင်း 85% လျှော့စျေး Tesco Oxfam Tesco UK သည်အမြတ်အစွန်းနှင့်ရောင်းရငွေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို UK Business မှ ၀ ယ်သည်။ သူတို့မှာ ၀ န်ထမ်း ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်နဲ့စတိုးဆိုင် ၂,၉၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ Tesco သည်စတိုးဆိုင်တိုင်း၌စျေး ၀ ယ်ခရီးတစ်ခုပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။
သင်၏ပထမဆုံး ၀ ယ်ယူမှုမှချက်ချင်းလက်ငင်း ၃၀% ကန ဦး ချိန်းဆိုမှုများအတွက် Oxfam Novib သည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးတစ်နှစ် (၁ လစမ်းသပ်ကာလ) အပါအ ၀ င်စာချုပ်တစ်ခုပေးသည်။ အဆိုပါရာထူးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oxfam သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှူရှင်များအားတရားမျှတသောလျော်ကြေးငွေအထုပ်တစ်ခုပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။ ဤရာထူးကိုစကေး ၈ တွင်ခွဲခြားထားသည်။
အပို 55% ဒီအထူးလျှော့စျေး Code ကိုအတူပါ Oxfam Novib သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှူရှင်များအတွက်မျှတသောယှဉ်ပြိုင်မှု၊ မျှတသော၊ ပြည့်စုံသောလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။ ဒီရာထူးအတွက်လစာအကွာအဝေးကို ၃၆ နာရီအလုပ်လုပ်ချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတစ်လလျှင်ပေါင် ၂.၉၁၁ မှ ၄.၄၇၉ ကြား၊ တစ်လလျှင်စုစုပေါင်းလစာစကေး ၉ ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
90% Off ဘောက်ချာ Oxfam Novib စာသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအီးမေးလ်ပို့ခဲ့ပြီးစာကိုလက်မှတ်ထိုးချိန်တွင်တောင်အာဖရိကတောင်ပိုင်းယာယီယာယီမန်နေဂျာ Oxfam Novib Ger Roebling ကလက်မှတ်ထိုးသည်။ ယခင် ၀ န်ထမ်းများနှင့် Oxfam Novid ပြောသောစကားနှင့်ဆန့်ကျင်။ GCN ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် Chisango သည်ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ရေးသားခဲ့သည်။
Voucher ဖြင့် အော်ဒါအားလုံး 25% လျှော့စျေး wereldwinkel amsterdam.nl နောက်ဆုံးပေါ်ကူပွန်ကုဒ်များ၊ လျှော့စျေးနှင့်ပရိုမိုကုဒ်အားလုံးကိုရယူပါ။ နေ့စဉ်မွမ်းမံထားသောကူပွန် ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျော်
ကူပွန်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ၃၀% လျှော့စျေး စွန့်စားမှုအခြေပြုချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအရ၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအလှူရှင်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်း၊ ငွေရေးကြေးရေးလိုက်နာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Oxfam Novib စံများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အန္တရာယ်များကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်လျော့ပါးခြင်းများကိုသေချာစေလိမ့်မည်။ Oxfam Novib သည် Partner Affiliate (PA) ဖြစ်သည့်ဘတ်ဂျက်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့်ထောက်ပံ့ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာနိုင်ငံရုံးများကိုအကြံပေးသည်။
သင်ယခု ၀ ယ်သောအခါချက်ချင်း ၁၀% လျှော့စျေး ကန ဦး ချိန်းဆိုမှုများအတွက် Oxfam Novib သည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးတစ်နှစ် (၁ လစမ်းသပ်ကာလ) အပါအ ၀ င်စာချုပ်တစ်ခုပေးသည်။ အဆိုပါရာထူးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oxfam သည်တရားမျှတသောလျော်ကြေးငွေပက်ကေ့ဂျ်အတွက်မျှတပြီးပြည့်စုံသောလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။
ဘောက်ချာကုဒ်ဖြင့် ချက်ချင်း 20% လျှော့စျေး Oxfam Novib သည်နိုင်ဂျာနိုင်ငံရှိ Oxfam အစီအစဉ်အတွက်တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ဘာကိုရှာနေတာလဲ။ နိုင်ဂျာတွင်ဤရည်မှန်းချက်ကြီးရူပါရုံကိုမောင်းထုတ်ရန်နှင့်ပို့ဆောင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိတွင်ထူးချွန်ပြီးထူးခြားသော Country Director တစ် ဦး ကိုရှာဖွေနေသည်။ ဤခေါင်းဆောင်သည်မဟာဗျူဟာမြောက်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသောခေါင်းဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုစွမ်းရည်များရှိလိမ့်မည်။
ဤဘောက်ချာကုဒ်ဖြင့် 65% လျှော့စျေးကို ခံစားလိုက်ပါ။ မညီမျှမှုကိုသရုပ်ဖော်ရန်ဤတွင် inequality.org နှင့် Oxfam Novib တို့မှအချက်အလက်အချို့ရှိသည်။ အချမ်းသာဆုံး ၁% သည်ကမ္ဘာ့ကြွယ်ဝမှု၏ ၄၅% ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ထိပ်တန်း ၀.၀၀၃% သည်ကမ္ဘာ့ကြွယ်ဝမှု၏ ၁၁.၃% ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
ကူပွန်နှင့်အတူ 20% လျှော့စျေးကိုလက်ခံရရှိ ကန ဦး ချိန်းဆိုမှုများအတွက် Oxfam Novib သည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးတစ်နှစ်စာချုပ်ကိုပေးသည်။ အဆိုပါရာထူးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oxfam သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှူရှင်များအားတရားမျှတပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။ စုစုပေါင်းလစာအကွာအဝေးသည်အခြေခံအားဖြင့်ပေါင် ၃.၂၄၅ မှ€ ၄.၉၉၄ အကြားဖြစ်သည်။
၆၀% လျှော့စျေးရယူပါ ကန ဦး ချိန်းဆိုမှုများအတွက် Oxfam Novib သည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးတစ်နှစ် (၁ လစမ်းသပ်ကာလ) အပါအ ၀ င်စာချုပ်တစ်ခုပေးသည်။ အဆိုပါရာထူးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oxfam သည်တရားမျှတသောလျော်ကြေးငွေပက်ကေ့ဂျ်အတွက်မျှတပြီးပြည့်စုံသောလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။
သင်ယခု ၀ ယ်သောအခါချက်ချင်း ၁၀% လျှော့စျေး ကန ဦး ချိန်းဆိုမှုများအတွက် Oxfam Novib သည်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးတစ်နှစ်စာချုပ်ကိုပေးသည်။ အဆိုပါရာထူးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oxfam သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှူရှင်များအားတရားမျှတပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။ ဤရာထူးကိုစကေး ၉ တွင်ခွဲခြားထားသည်။
လက်ငင်း 65% လျှော့စျေး ဒါကသားဖွားအဖုံးအတွက် Oxfam Novib ကစာချုပ် ၁၅ ရက် ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီ ၃၁ အထိ (လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုဖြစ်နိုင်ခြေ၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ဘတ်ဂျက်ရရှိနိုင်မှုပေါ် မူတည်၍ စာချုပ်) ကိုပေးသည်။ ရာထူးသည်နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oxfam သည်တရားမျှတပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောလစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များပေးအပ်ရန်ကတိပြုသည်။
အမှာစာတိုင်း 50% လျှော့စျေး ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက် ၂၀၁၃ - ဒီ Pin ကို Bridie -louise Gunnill မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Pinterest တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Pins များကိုရှာဖွေ။ သိမ်းဆည်းပါ
သင်ယခုမှာယူသောအခါအပို 75% လျှော့စျေး Oxfam ဧရိယာပွင့်လင်းသော PNG နောက်ခံမရှိသောဤ Oxfam ဧရိယာပွင့်လင်းသော PNG ပုံကိုယခုအခမဲ့ download လုပ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပရောဂျက်များတွင်၎င်းကိုသုံးပါ (သို့) WhatsApp၊ Tik Tok၊ Instagram၊ Facebook Messenger၊ Wechat၊ Twitter သို့မဟုတ်အခြားစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်စတစ်ကာအဖြစ်မျှဝေပါ။ လိုင်စင် - ဒီဖိုင်ကို Nbfcupmtart ကတင်ပြီးကိုယ်ပိုင်အတွက်သာအခမဲ့သုံးခဲ့သည်။
Promo Code ဖြင့်မည်သည့်အမိန့်ကိုမဆို ၆၅% လျှော့ချသည် Knausgaard သည် The Hague ၌ကြာသပတေးနေ့ Oxfam Novib/PEN ဆုပေးပွဲတွင်စာရေးဆရာလေး ဦး ဖြစ်သောလစ်ဗျားစာရေးဆရာနှင့်သတင်းစာဆရာ Razan al-Maghrabi၊ အီရန်သတင်းထောက်နှင့် ...
ဘောက်ချာကုဒ်ဖြင့် မှာယူမှုအားလုံးကို 15% လျှော့စျေး Coupons Guardian Puzzles app World ... Oxfam Novib မှ Andrea Pattison ကတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်တရားမ ၀ င်မှုများသည်ဆိုမာလီယာတွင်လုံခြုံစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ "အကြီးဆုံးပြဿနာက ...
အပို 40% အထူးနှုန်းများကိုအသုံးပြု။ လျှော့ Ugandan ပညာရှင်၊ စာရေးဆရာ၊ အမျိုးသမီးဝါဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Dr Stella Nyanzi သည်နိုင်ငံ၏သမ္မတကိုဝေဖန်ခြင်းဖြင့်ထောင်ချခံရပြီး Oxfam Novib/PEN နိုင်ငံတကာဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။
သင်၏ပထမဆုံး ၀ ယ်ယူမှုကို ၅၅% သိမ်းပါ Oxfam နှင့် Novib ၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် Oxfam ၀ န်ထမ်းများကအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်သောဖြစ်ရပ်များသည်ကြီးမားသောပေါင်းစည်းဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များမှစီမံကိန်းများအထိအကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများစွာကိုမည်သို့ပြသခဲ့သည်။ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုသာပါဝင်သည်။
မည်သည့်အမိန့်ကိုမဆို ၄၅% လျှော့စျေး ကူပွန်များအုပ်ထိန်းသူပဟေိအက်ပလီကေးရှင်း ၁၀ ဘီလီယံကိုကျွေးမွေးသော Guardian ရေရှည်တည်တံ့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အညွှန်းသည် Monsanto, Dupont နှင့် Syngenta တို့အား Oxfam Novib မှမျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်သူ ...
Code နှင့်အတူ 15% ချွတ်ဆုပ်ကိုင် Plstka သည်အစားအစာ၊ သောက်ရေ၊ ဆေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစသည့်အမျိုးမျိုးသောဘဝ ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်လျှော့စျေးနှင့်ဘောက်ချာကူပွန်များကို IOT Supply Chain System ပါ ၀ င်သောပထမ ဦး ဆုံး gamification mobile app တစ်ခုဖြစ်သည်။ မရ။
အမှာစာအားလုံးမှ ၂၀% အထိလက်ခံရရှိပါ ဟုတ်! အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်၊ ငါတို့ကဒီအလုပ်တွေကိုမတူညီတဲ့အလုပ်ဆိုဒ်မျိုးစုံမှာတင်ဖို့ပိုက်ဆံပေးခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ပိရမစ်အစီအစဉ်တစ်ခုပင်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ဤအရာကိုရယူပါ၊ ပိုင်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်း ၃၀ ကျော်အား Pizza Hut ကူပွန်များအစားငွေဖြင့်ပေးချေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်မွေး ၀ မ်းကြောင်းစာမျက်နှာများသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ရူးသွပ်သည်ကိုပိုမိုလေ့လာရန်အတွက်စစ်ဆေးရကျိုးနပ်သည်။
ဤကူပွန် Code ကိုလက်ငင်း 60% လျှော့ Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y la Casa de los Derechos de los Periodistas acompañaron su caso ။ A su salida de la prisión, desde donde ဖော်ပြချက် el horror des la cárcel, ganó en Holanda el premio internacional Plumaala Libertad de Expresión, que otorga la fundación no gubernamental Oxfam Novib / Rory Peck ။
သင့်မှာယူမှုများမှ ၄၅% လျှော့ချ သူမသည် ၂၀၁၁ တွင် Minsk သို့မပြန်မီ Paris, Gothenburg နှင့် Berlin တို့တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် National Book Critics Circle Award, Prix Médicisနှင့် Oxfam Novib/PEN ဆုများအပါအ ၀ င်ဆုများစွာဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်သူမသည်စာပေနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ Bela Shayevich သည်စာရေးဆရာ၊ ဘာသာပြန်သူနှင့်သရုပ်ဖော်သူဖြစ်သည်။
သင်ယခုမှာယူပါကချက်ချင်း ၂၅% လျှော့စျေး စာများ: ဤထုတ်ဖော်မှုများသည် Luxembourg အားရန်လိုသောအခွန်ရှောင်မှုအစီအစဉ်များကိုချမှတ်ခဲ့သည့်စက်မှုအတိုင်းအတာကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီသည်ကိုငါတို့ယုံကြည်သည်။
သင့်မှာယူမှုများမှ ၄၅% လျှော့ချ Oxfam Novib Oct 2018. CA (Certificate level) The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh - ICAB Issued Dec 2017. Credential ID 16599/09 International Trade with & without opening LC Prothomalojobs Issued Dec 2012. Keizen & 5S on Management (ဂျပန်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာများ ) ..။
Sitewide Promo Code ၏ 45% off
အမှာစာအားလုံးအား ၄၀% အထိရယူပါ
ဤဘောက်ချာကုဒ်ဖြင့် ချက်ချင်း 40% လျှော့စျေး
အွန်လိုင်းအမှာစာ ၁၀% ကိုခံစားပါ
ExoSpecial > Merchants (O) > Oxfam Novib
Oxfam Novib is rated 4.5 / 5.0 from 83 reviews.